Ady Ao Nagorno Karabakh: “Zaratany Noafahana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Septambra 2017 3:39 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny Mey taona 2007 no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Feno tombatombana momba ireo faritra fito ao Azerbaijan eo ambany ny fifehezan'ny tafika Armeniana sy Karabakh amin'izao fotoana izao, izay antsoin'ireo manana fijery nasionalista kokoa hoe “Zaratany Noafahana” ny tontolon'ny blaogy Armenianina.
Satria efa akaiky ny fifidianana parlemantera, mitodika indray amin'ny olana voalohany (angamba) ao amin'ny faritra ny fiarahamonina iraisampirenena – dia ny ady mangatsiaka tsy voavaha ary indrindra indrindra, Nagorno Karabakh, hoy i Onnik Krikoryan mijery ny fivoaran-draharaha farany momba ny famahana ny olana, mandinika ny RFE / RL, Today.az sy Eurasia Daily Monitor.
Tsy mahagaga raha nahita fa tany Yerevan tamin'ny fiandohan'ny herinandro talohan'ny nifindrana tany Baku ireo mpanelanelana avy amin'ny Fikambanana misahana ny Fiarovana sy ny Fiaraha-miasa any Eoropa (OSCE). Araka ny tatitry ny RFE / RL navoaka tamin'ny andro nialany, nanambara ireo mpanelanelana ao amin'ny vondrona OSCE Minsk fa manantena izy ireo fa ny filoham-pirenena Armeniana sy Azerbaijan dia hihaona amin'ny fihaonambe izay hatao ao Saint-Petersburg amin'ny 10 Jona. Noho ny fifidianana filoham-pirenena hatao any Armenia sy Azerbaijan amin'ny herintaona, tena kely ny fotoana ary fotoana bitika ahafahana manao fifanarahana ara-barotra efa nandrasana hatry ny ela.
Raha mitady vahaolana azo hamahana ny fifandonana ny Oneworld Multimedia, mitatitra kosa ny gazety Armenian Breaking News fa mandrisika an'i Azerbaijan amin'ny ady ao Karabakh i Tiorkia:
«Ny adin'i Nagorno Karabakh dia tsy mety vahàna am-pilaminana. Tokony ho fantatry ny rehetra fa ny tany izay nalaina tamin'ny fandatsahan-drà dia tsy azo averina tsy misy fandatsahan-drà, “hoy ny lietnà jeneraly Yasak Demikbilek, lehiben'ny sapam-pitsikilovana Tiorka taloha.
Araka ny voamarik'i Onnik Krikoryan ihany koa tamin'ny lahatsoratra voatonona etsy ambony, manohy manelingelina ireo mpanao politika sy mpikatroka ao Armenia ny olan'ny faritra fito ao Azerbaijan izay eo ambany fahefan'ny tafika Armeniana sy Karabakh. Tamin'ny alalan'ny Ahousekeeper (ru), nahafantatra aho fa namoaka sombin-dahatsary vitsivitsy tamin'ny fampahafantarana ny boky “Faritra Noafahana ao Armenia” i Anaid1708 (am), izay noresahan'i Armen Ayvazyan (mpahay siansa politika) sy Zori Balayan (mpanao gazety, mpanoratra) momba ny maha zava-dehibe ny fitazonana ireo tany ireo eo am-pelantànan'ny Armeniana ary mametraka ity olana ity eo amin'ny sehatry ny famahana ny Fanontaniana Armeniana, izay fehezanteny diplomatika, miresaka momba ny fiarovana sy ny fahalalahan'ny Armeniana avy amin'ny vondrom-piarahamonina mpifanolo-bodirindrina aminy.
Toa nanomboka tao amin'ny forum OpenArmenia ny onjam-pifanakalozan-kevitra vaovao, ary avy eo i Kornelij Glas (ru) namoaka momba ny fitakiana nosoniavin'ireo loharanom-baovao aterineto maromaro (ru) manohitra ny fanomezana ireo faritra noafahana, izay milaza fa ny fifampiraharahana amin'izao fotoana izao dia mifototra amin'ny “fahavononan'i Armenia hahafoy ireo faritra fito efa noafahana manodidina an'i NKR, ka miaina amin'ny lalamben'i Lachin ihany (fa tsy ny faritra).” Ho takalon'izany, hahazo zo hitantana referandaoma ao amin'ny ny satany i Karabakh rehefa afaka 5- 15 taona eo ho eo. Milaza i Kornelij Glas (ru) izay olona vitsy ihany no miombon-kevitra aminy – fa hitondra ady vaovao tanteraka izany ka ho anisan'ny very i Armenia – ary amin'ireo olona vitsy ireo, mihevitra ny maro fa avy any Karabakh i Robert Sedrakovich (filoham-pirenena Armeniana) ary tsy hanaiky lembenana velively mikasika ny raharaha.
Nanatevin-daharana ny fanangonan-tsonia ihany koa i Ahousekeeper (am) ato, ato sy ato ary toy izany koa i Freedomfight777 (am) sy Hayblog (ru), ary mandrisika ny rehetra mba hanasonia ny fangatahana “MANOHITRA NY FANOLORANA NY FARITRA NOAFAHANA” ao amin'ny http://www.miacum.ru. Nanoratra ny Armenia Breaking News fa araka ny filazan'i Vahram Atanesyan, filohan'ny komity parlemantera NKR misahana ny fifandraisana any ivelany, ny olana rehetra noresahina nandritra ny fifanakalozan-kevitra dia tsy maintsy anaovana adihevitra ampahibemaso:
Heveriko fa hamaha ny olan'ny satan'ny NKR sy ny faritany manodidina ny NKAR taloha [Nagorno Karabakh] ny vahoakan'ny NKR, satria ny vahoaka ihany no mahazo hery.
Mijery ireo resabe ao amin'ny tontolon'ny blaogy, nilaza i Uzogh (ru) fa tsy misy lalana hivoahana raha tsy misy ny famahana ny ady ao Kharabakh ary manontany hoe- inona no safidy?
Mahafantatra [safidy 2 misy ankehitriny] aho: ny toerana misy an'i Jirayr Sefilyan (izay azo lazaina fohifohy hoe: “ry helo, miahy ny famahana ny olana ve izahay, mety aminay ny ankehitriny”), izay mandà ny foto-kevitra famahana olana, ary manana tombatombana manjavozavo isika, izay mety hampiasana ny fehezanteny hoe “manolotra ireo faritra 7″.
Tena nahaliana tokoa ny lahatsoratr'i Uzogh’s (ru) : fanehoan-kevitra 103 tamin'ny hitako farany, izay tena goavana kokoa raha amin'ny fenitry ny bilaogy Armeniana.
Nilaza i Pigh (ru) fa tsy hanao sonia ilay fangatahana izy. Feo tsy misy dikany avokoa izany hoy ilay bilaogera: “Tsy hahafoy an'i Karabakh- – 100% mandrakizay i Serge sy Robert [Praiminisitra sy Filoha]”.
Zavatra iray no azo antoka – raha mitady fandriampahalemana sy fampandrosoana eto amin'ity faritra ity i Armenia, tsy maintsy miomana hahafoy zavatra isika. Saingy inona no tena vidiny?
21 ora izayZeorzia